Fahaverezana ankizy :: Nifandona ny zandary sy ny andian’ olona teny Ambohitrimanjaka • AoRaha
Fahaverezana ankizy Nifandona ny zandary sy ny andian’ olona teny Ambohitrimanjaka
Niafara tamin’ny fifandonana teo amin’ny andian’ olona sy ny zandary ny raharaha fahaverezana ankizy iray, teny Ambohitrimanjaka, afak’omaly. Nikasa hanao fitsaram-bahoaka tao amina tokantrano iray nolazain’ny mpimasy fa mitazona an’ilay zaza ireo andian’olona. Voatery nampiasa baomba mandatsa- dranomaso nanaparitahana ireo olona ny mpitandro filaminana. Naratra voatorabato ny zandary iray.
Tsy hita nanomboka tamin’ ny 3 jona ny ankizivavy iray monina eny Ambohitrimanjaka. Nolazain’ny mpimasy iray tamin’ny ray aman-dreniny fa nafenin’olona tao amina tokantrano iray eny Faraindra io zaza io, afak’omaly. Nanomboka teo ny savorovoro rehefa nirohotra teny amin’ilay trano saika hisava sy handoro ny toerana ireo andian’olona an’arivony.
Soa fa niara-tonga nijery tao anatin’ny trano ny zandary sy ny solontenan’ireo mponina avy eo, saingy tsy nahita an’ilay zaza tao akory. Mbola nampisisika an’iretsy andian’olona hanao fitsaram-bahoaka hatrany anefa izany, araka ny fitantaran’ireo mponina nanatrika ny zava-niseho. Tokony ho tamin’ny 2 ora sy sasany tolakandro no niantso ny rainy tamin’ny findainy mba halaina eny Analakely iry zaza voalaza fa very.
Sanatria toa nisy liandra na te hikorontana ny sasany tao anatin’ireo andian’ olona rehefa nanamafy ny mila hanaovana fitsaram-bahoaka tamin’iry tokantrano voasoketa ihany ny fokonolona. Naverin’ny zandary sy ny ray aman-drenin’ny ankizy tsy hita ny faharaisan’izy ireo antso momba ny hakàna an’ ilay zaza eny Analakely.
« Nanomboka ny torabato niantefa tamin’ny mpitandro filaminana, taorian’ izay. Nitaky ny hampisehoana an’ilay zaza eo imasony ireo andian’olona », hoy ihany ny loharanom-baovao nahita ny fisehon’ity savorovoro teny Ambohitrimanjaka ity.
Teo no voalaza fa nanery an’ireo zandary hampiasa fitaovam-piadiana. Naparitaka tamin’ny baomba mandatsa-dranomaso ireo andian’ olona. Nahazo namana fanampiny rahateo ireo zandary. Raikitra indray ny sakana sy fandoroana kodiarana nataon’ ny andian’olona, nony maizina ny andro. Ora maro taorian’ izay, tokony ho tamin’ny 10 ora sy sasany alina vao nanomboka voafehy ny toe-draharaha. Nanokatra fanadihadiana momba an’izao korontana teny an-toerana izao ny Zandarimaria.
Raharaha fahafatesana karana :: Voatazona eny am-ponja hatrany ireo voampanga
Trafika harena an-kibon’ny tany :: Talena orinasam-panjakana nitondra vato « Cristal » 200kg